We.com.mm - ဗိုက်ထဲအစာမရှိချိန်မှာ ဒါတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့
ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်ပြီး စားဖို့ကိုမေ့နေတတ်တာမျိုးတွေ အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့ ရုံးသမားတွေမှာ ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်…။ ဒီလိုမျိုး အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ အဆာလွန်ပြီး ဗိုက်ထဲမှာဘာအစားမှမရှိတဲ့အချိန်မှ တစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ မှားယွင်းပြီးလုပ်မိနေတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်…။ ကိုယ်ကတော့မသိလိုက်ပဲ လုပ်မိလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားပြီး လိုက်နာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီတော့ ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိနေတဲ့အချိန်မှာ မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ We ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
ဆေးသောက်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းနီးပါးသိထားတာကတော့ ဗိုက်ထဲမှာအစာရှိနေမှ ဆေးသောက်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေအရ ဆေးသောက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာ ဗိုက်ထဲမှာလည်းအစာမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးကိုဒီတိုင်းသောက်လိုက်လို့မရပါဘူး…။ ဗိုက်ထဲမှာအစာရှိမနေပဲ ဆေးသောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးအာနိသင်ကို မထိရောက်စေပဲ ကျန်းမာရေးတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်…။ ဒီလိုအခါမှာ ရေအစား နွားနို့ကိုအစားထိုးပြီးသောက်လို့ရပါတယ်…။ နွားနို့က ဆေးတွေထဲမှာပါတဲ့ NSAIDs ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို လျော့နည်းစေနိုင်တာကြောင့် အစာမရှိတဲ့အချိန်မှာ ဆေးကိုနွားနို့နဲ့ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုးကျိုးဖြစ်မှုတွေကို ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ကော်ဖီသောက်မယ်ဆိုရင် ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ကဖင်းဓာတ်တွေက ထွက်လာတဲ့ အက်စစ်ဓာတ်တွေက ရင်တုန်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်…။ မနက်ခင်းမှ မနက်စာကိုမစားပဲ ကော်ဖီပဲသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုကတုန်ကရင်ဖြစ်စေပြီး တစ်နေ့တာလုံးမှာ မအီမသာနဲ့ နေရထိုင်ရခက်တာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီသောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း နို့ ဒါမှမဟုတ် ခရင်တွေများများထည့်ပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်…။ နွားနို့က မကောင်းတဲ့ Side Effect တွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်တာကြောင့် အစားမစားရသေးချိန်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင် ရင်တုန်မှုတွေကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်…။
အရက်သောက်တယ်ဆိုတာကလည်း ဗိုက်ထဲမှာအစာအနည်းငယ်တော့ရှိနေမှ ရမှာပါ…။ ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိပဲ အရက်သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရက်နာကျတာကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်…။
၄. အစာမရှိဘဲ အိပ်ရာဝင်ခြင်း…
လူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့ကို ၈ နာရီ ပုံမှန်အိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အစာမရှိပဲအိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၈နာရီလုံး ဗိုက်ထဲမှာအစာမရှိပဲ အချိန်အကြာကြီးဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ အစာမရှိပဲအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာ သင်အိပ်မောကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဗိုက်ဆာစေတဲ့ဟော်မုန်းတွေ အများအပြားထွက်ရှိစေတာကြောင့် သင်ကိုစောစောနိုးတာတွေ ပြန်အိပ်မပျော်စေတာမျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ဘာမှမစားရသေးပဲ အိပ်ရာဝင်တော့မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ နွားနို့ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်တော့ သောက်ပေးပြီးမှ အိပ်သင့်ပါတယ်…။
၅. ချဉ်တဲ့ဖျော်ရည်တွေကို သောက်ခြင်း…
ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ချဉ်တဲ့ဖျော်ရည်တွေကို သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုဗိုက်အောင့်တာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်…။ ချဉ်တဲ့ဖျော်ရည်တွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အက်စစ်ဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက လေတတ်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အစာမရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်…။ ဒီလိုမျိုး အစာမရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေကို သောက်လိုက်မိပြီဆိုရင်တော့ သောက်လိုက်တဲ့ဖျော်ရည်ပမာဏရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ ရေကိုလည်း အစားထိုးပြီး ပြန်သောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လေချဉ်တက်တာတွေကို လျော့နည်းစေမှာပါ…။
အီတလီအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Avocado Carbonara” အလွယ်ပြုလုပ်နည်း
ဂျပန် Anime ရုပ်ရှင်တွေထဲက အစားအသောက်တွေနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ စားချင်စရာ အစားအစာ ( ၁၅ ) ခု
အစားတစ်လိုင်း မမတို့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် မုန့်ကောက်ဂိမ်း